गृह मन्त्रालयमा कसको अाँखा? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
गृह मन्त्रालयमा कसको अाँखा?
१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०८:०५
माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेस मुख्य साझेदार भएर सरकारमा सहभागी हुने भएसँगै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा कांग्रेसमा दौडधुप सुरु भएको छ । गृह र उपप्रधानमन्त्रीससहित कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा तीव्र दौडधुप सुरु भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीका लागि वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिले आकांक्षा देखाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट कसले मन्त्री पाउने कसले नपाउंने ?